wararka maanta-arlaadii.net » Shabaab oo Lacaga ja qaadaya Ganacsatada Magaalada Muqdisho
Shabaab oo Lacaga ja qaadaya Ganacsatada Magaalada Muqdisho
Al Shabaab oo si caadiyan ah loo ogyahay inay lacago kala duwan ka qaadaan ganacsatada ku nool Magaalada Muqdisho iyo Shirkadaha ganacsi ee waaweyn, ayaa todobaadkaan bilaabay ganacsato hor leh inay ugu hanjabaan bixinta lacago ay siiyaan Shabaab.
Nin ka mid ah ganacsatada ku nool Xaafadda Carafaat ee Degmada Yaaqshiid, goob ganacsi oo aad u wayna halkaasi ku leh, ayaa lagula soo xiriiray taleefoonka, waxaana la waydiiyay cadadka lacagta uu ku ganacsado, si loo qiimeeyo, kadibna loo rido xukunka ah tirada lacagta bil kasta laga rabo.
Milkiilaha goobtan ganacsi ayaa ka been sheegay cadadka lacagta uu ku ganacsado, wuxuuna u sheegay Al Shabaab lacag yar isaga oo dareensan inay waydiin doonaan qarash bile ah, ama mid badan oo halmar laga wada qaado.
Xubnihii ka tirsanaa Al Shabaab ee taleefoonka kula soo xiriiray ninka ganacsadaha ah ayaa ku damiyay taleefoonka, kadib markii ay dareemeen goobta ganacsiga ninkaan oo ah mid aad u wayn iyo cadadka lacagta uu sheegay inaysan islaheyn.
“Waa ay soo waceen oo waxa ay dhaheen meeqa ayaad ku ganacsataa tirada lacagta ganacsiga sheeg, kadib wuxuu u sheegay lacag been ah, kadibna taleefoonka ayeey ku damiyeen.” Ayuu yiri nin ka mid ah Shaqaalaha goobtan.
Dhawr cisho kadib raggii ka tirsanaa Al Shabaab ayaa laba nin oo Bistooladley ah u soo diray ninkii ganacsadaha ahaa goobtiisa ganacsiga, waxayna soo dhex galeen gudaha xaruntan, kadibna waxaa taleefoonka lagula soo xiriiray milkiilaha goobta ganacsiga oo xilligaasi joogay goobtiisa.
Waxaa loo sheegay inay la joogaan rag ka tirsan Al Shabaab oo loo qorsheeyay inay isaga dilaan, xilligan ay ku sugan yihiin gudaha xaruntiisa ganacsiga.
“Markii la dhahay laba nin ayaan kuu soo dirnay oo gudaha goobtaada ganacsiga joogta ayuu fiiriyay dhinacyada ninka iska leh meesha, kadib nin dhalinyaro ah ayaa kor u qaaday shaatiga oo waxaa sheeda laga tusay Bistoolad, intaasi markii ay dhacday ayaa milkiilaha goobta ganacsiga la waydiiyay mar kale su’aasha ah waa imisa lacagta aad ku ganacsatid? Wuxuuna ku jawaabay jawaabtii saxda aheyd oo wuxuu sheegay tirada lacagta uu ku ganacsado.”
Xubnihii Al Shabaab ka tirsanaa ayaa lacag ganaax ah oo dhan 5-kun oo doolar dul dhigay milkiilaha goobta ganacsiga, waxayna intaasi u sii raaciyeen bil kasta in laga doonaayo lacag dhan $500 haddii uu bixin waayana la dilaayo.
Ganacsato kale oo ku nool Suuqa labaad ee Muqdisho, Suuq Bacaad ayeey sidaan oo kale Al Shabaab ugu amreen inay bixiyaan lacagtaan baada ah, ganacsatadan markii hore ma aysan bixin jirin lacagta oo goobahooda ganacsiga ayaa ahaa kuwa yar yar.
Al Shabaab ayaa bil kasta lacago fara badan ka hela ganacsatada ku nool Magaalada Muqdisho oo ay ugu hanjabaan dil ama inay bixiyaan lacagta Shabaab ay ka doonayaan.
Turkiga iyo Emaraadka oo Mar kale hadalo kul kul is dhaafsaday
Ciidamada Nisa Oo weerar Qorshesan ku qaaday saaka Degmo Ka tirsan Caasimada Muqdisho